Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Kugonywe indiza eyi-KLM kuphela: i-Amsterdam-Singapore
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Izindaba zaseNetherlands • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Singapore Breaking News • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
Kugonywe indiza eyi-KLM kuphela: i-Amsterdam-Singapore.
I-KLM Royal Dutch Airlines izonikezela ngohambo olungabekwa eceleni lokuhlukaniswa nezindiza ezindiza nge-Vaccinated Travel Lane (VTL) eziya eSingapore zisuka e-Amsterdam njalo ngoMsombuluko nangoMgqibelo.
Kusukela ngomhla ka-21 Okthoba 2021, i-Air France isebenzisa izindiza ezimbili eziqokiwe njalo ngeviki ze-Vaccinated Travel Lane (VTL) ezisuka eParis ziya eSingapore.
Kusukela ngomhlaka 1 Novemba 2021, i-KLM isebenzisa izindiza ezimbili eziqokiwe njalo ngeviki ze-Vaccinated Travel Lane (VTL) ezisuka e-Amsterdam ziya eSingapore.
Abahambi kumele bahlangabezane nazo zonke izidingo ze-Vaccinated Travel Lane (VTL).
Kusukela ngoNovemba 1, i-2021 KLM Royal Dutch Airlines izonikezela ngohambo olungabekwa eceleni ngokuhlukaniswa nezindiza eziqokiwe ze-Vaccinated Travel Lane (VTL) Singapore kusuka e-Amsterdam njalo ngoMsombuluko nangoMgqibelo.
Ngokusebenzisa ihabhu laso eAmsterdam-Schiphol Airport, KLM bazongena kwinethiwekhi yabo ehambisanayo futhi banikele ngezindiza ezine eziqokiwe ze-VTL zamasonto onke nezindiza eziyisithupha ezingavunyelwe ze-VTL Singapore.
URoland Coppens, Umphathi Jikelele we-Air France KLM ISouth East Asia ne-Oceania babeke amazwana: Singapore. I-Air France ne-KLM bakhe inethiwekhi ehambisanayo nezindiza ezine eziqokiwe ze-VTL eziya eSingapore, kanye nezindiza eziyisithupha ezingakhethiwe ze-VTL ezivela eParis nase-Amsterdam. Ngenethiwekhi yethu ebanzi ye-Air France KLM, siyakwazi ukuxhuma amazwe amaningi e-VTL ngezindawo zethu ezimbili eParis nase-Amsterdam, nezimo zamathikithi aguquguqukayo. ”
Uhlelo lwezindiza lwe-KLM olusuka e-Amsterdam luye eSingapore
Luhlelo Inombolo Yendiza Day Ukuhamba Ukufika Aircraft
kuze kube ngumhlaka 31 Okthoba 2021 I-KL835 / KL837 / KL839 Daily 21: 15 15: 45 + 1 B787 / B77W
01 Novemba 2021 kuya ku-26 Mashi 2022 I-KL835 / KL837 / KL839 NgoLwesibili
I-KL833 (VTL) Monday
Ezokuvakasha iSeychelles ne-Emirates Airlines Zibamba iGCC Media
Amaqhawe e-WTN avela emazweni ayi-128 athanda iKenya: Ukuvakasha Komhlaba...